Iyo iPhone SE, 6s uye 6s Plus ikozvino yakachipa uye iine huwandu hukuru | IPhone nhau
Nguva dzese kambani painoburitsa itsva iPhone modhi, mitengo inokwirawo zvichienzaniswa negore rapfuura, chimwe chinhu shamwari yedu Luis de Barco yatotaura nezvayo mune yapfuura chinyorwa, iwo mamodheru ayo anouya kutsiva zvine musoro zvinoderedza mutengo wavo nepo mamwe mamodheru, akadai seiyo iPhone 6 uye 6 Plus, achinyangarika zvachose kubva pamusika.
Pane ino chiitiko, sekuona kwedu pazasi, iyo Cupertino-based kambani yakagadzirisa nzvimbo yekuchengetera yeiyo iPhone 6s uye 6s Plus, kuwedzera diki nzvimbo yekuchengetera kusvika 32 GB, inopfuura nzvimbo inonzwisisika zvekuti tinofanirwa kudzima mashandisirwo ese maviri kana matatu ekushandisa, mitambo kana kunyange mavhidhiyo kubva kuchishandiso chedu.
Isu tinotanga neiyo iPhone SE, iyo-ina-inch chishandiso iyo Apple yanga ichida kudzoreredza vese avo vashandisi vanofunga iwo matsva masikirini makuru akakurisa kuti vashandise, kuwedzera kumaoko avo. Pane ino chiitiko, Apple haina kuwedzera mukati yekuchengetera iyi kifaa, saka iyo inoenderera neyakaipisisa 16GB yekuchengetedza.
1 IPhone SE mitengo mushure mekutanga kweiyo iPhone 7
2 Mitengo yeiyo iPhone 6s mushure mekutanga kweiyo iPhone 7
3 Mitengo yeiyo iPhone 6s Plus mushure mekutanga kweiyo iPhone 7
IPhone SE mitengo mushure mekutanga kweiyo iPhone 7
16GB iPhone SE: 489 euros
64GB iPhone SE: 549 euros
Asi Apple haina kungofunga kuwedzera hushoma nzvimbo yekuchengetera pane iyo iPhone 6s, asi zvakare yabvisa iyo 64 GB kugona, ichisiya chete 128 GB sarudzo yekuchengetera kukuru.
iPhone 6s 32GB: 659 euros
6 GB iPhone 128s: 769 euros.
iPhone 6s Uye 32GB: 769 euros
iPhone 6s Uye 128GB: 879 euros
Ino ndiyo nguva yakanaka yekumisikidza chishandiso uye kutora mukana wemutengo wakaderera weiyo iPhone 6s kana iPhone 6s Plus ine 128 GB yekuchengetedza. Uye ini ndinotaura pane izvi nekuti sarudzo nyowani dzemahara dzakaunzwa ne iPhone 7Sezvazvaive zvakaita neiyo 3D tekinoroji mune iyo iPhone 6s, iyo inokanganisa mashandiro echishandiso, hapana zviripo, kunze kwekunge iwe wekutanga yako iri mbiri kamera yeiyo iPhone 7 Plus.
Munyaya yangu yapfuura, ini ndakuratidza dzakasiyana dzatinogona kuwana pakati peiyo nyowani iPhone 7 uye iyo iPhone 6s, kwaunogona kuona kuti shanduko dzemhando nyowani ye iPhone pakuenzanisa neye yapfuura modhi iri chaizvo, kazhinji, misiyano midiki.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 6s » Iyo iPhone SE, 6s uye 6s Plus ikozvino yakachipa uye iine huwandu hwakawanda
Iyo iPhone SE inoenderera pamutengo mumwechete wekuvhurwa kwayo, uye iine huwandu hwakaenzana. Izvo chete izvo zvinodzika pasi i6S uye 6S Plus, tisingatauri kuti ivo vakabvisa iyo iPhone 6 kubva mukabhuku.
Iyo 64 GB iPhone yadonhedza makumi mana euros ichienzaniswa nemutengo wekutanga kwayo.
Diego Miguel Ferretti akadaro
Pane kukanganisa kudiki mumusoro wenyaya ivo vanodzokorora 6s uye wechipiri ma6 kuwedzera, kukwazisa.
Pindura kuna Diego Miguel Ferretti
Ini ndinopinda iro Apple peji uye iyo iPhone SE vachiri 16 uye 64.
Mutengo weiyo 64 GB modhi wadonha ne50 euros.
MuUS $ iyo 64GB yadonhedza makumi mashanu emadhora. Mutengo mu € hautarisirwe, asi zvingave zvine musoro kuti ingadai yakadzikawo. Ini ndinotenda iwe Ignacio 🙂 Chinhu chinoshamisa ndicho chakaitika kuUK. Iyo 50GB ichiri pamutengo mumwe chete asi kana ndikasakanganisa iyo 64GB yakwira kumusoro! £ 16 kusvika £ 359. Zvirinani zvine chekuita neiyo yaive yekutanga mutengo. Zvichida vakasimuka kare nekuda kwekudonha kwepondo kubva pareferendamu / Brexit uye izvozvi iyo 379GB yadonha, ichigara pamutengo mumwe chete sepaya payakatangwa.
Ndakazviongorora mune chinyorwa apo isu takaongorora iyo iPhone SE, ini ndaisazviziva nemusoro.
Izvo zviri pachena ndezvekuti zviziviso nezvemutengo zvinowedzera kana kudzikira uko Apple inogadzira mune yega yega kiyi inoitirwa chete musika weAmerica, nemitengo yemidziyo.
Chokwadi chepondo uye kudonha kwayo ndechimwezve chikonzero cheApple chekuhwanda kumashure kweshanduko yemari kana ichida kukwidza mutengo wemidziyo yayo.
Iphone SE 64gb, kubva 589 kusvika 549, 40 euros.
KuChile, iyo iPhone SE yakakwira, ine chirongwa che40.000 Chilean pesos, iyo iPhone SE yakabuda 89.990 Chilean pesos. Uye zvino mushure mekunge iyo iPhone 7 yaenda kutengeswa pano, iyo iPhone SE yezano rakafanana yabuda 189.990 pesos yakakwira ingangoita zana nemakumi mashanu emadhora… Hutsinye!
Apple Music inoenderera ichikura, yatove nevamiririri gumi nemamiriyoni gumi nemanomwe
Iri bhatani idzva reKumba reiyo iPhone 7